बुढो भइरहेको सुर्यको मृत्यु कहिले हुन्छ ? नासाको टेलिस्कोपले गर्‍यो महत्वपूर्ण खुलासा - Khabar Center
काठमाडौं । ब्रम्हाण्डमा धेरै यस्ता रहस्यमय चिजहरु छन् जसको बारेमा वैज्ञानिकहरुले जान्ने कोसिस अनवरत रुपमा गरिरहेका हुन्छन् । यसैबीच वैज्ञानिकहरुले एउटा यस्तो तस्वीर हात पारेका छन् जसबाट सुर्यको बारेमा नयाँ जानकारी प्राप्त भएको छ ।
नासाले हबल टेलिस्कोपले खिचेका अद्भूत तस्वीरहरु आफ्नो आधिकारिक इन्स्टाग्राम अकाउन्टमा समय समयमा सार्वजनिक गर्दै आएको छ । (साइन्स अल्र्टडटकम)
प्रकाशित मिति :मंसिर ९ २०७८ बिहिवार - १३:२५:४० बजे
टुँडाल : किन हिन्दू धर्मका मन्दिरमा मात्र कुदिन्छ यौनजन्य कला ?
कुन बार जन्मिएका मान्छेको स्वभाव र भाग्य कस्तो हुन्छ ?
शताब्दीकै लामो खग्रास चन्द्र ग्रहण आज, के गर्ने, के नगर्ने ?